Nọgidenụ na-ekiri na gị Online Asọmpi na Rivalfox | Martech Zone
Rivalfox na-anakọta data site na isi mmalite dị iche iche na ndị asọmpi gị wee mee ka data ahụ dị mfe site na otu ụlọ ọrụ data na-asọmpi. Isi mmalite gụnyere okporo ụzọ, ọchụchọ, weebụsaịtị, akwụkwọ akụkọ, pịa, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mmadụ na mgbanwe ọrụ.
Rivalfox bụ azịza SaaS nke na-etinye ọgụgụ isi na-asọ mpi n'aka gị. Anyị kwenyere na site n'ịmụta n'aka ndị asọmpi gị, ị nwere ike ito eto ngwa ngwa, zere mmejọ ma nweta uru. Site na Rivalfox, ụlọ ọrụ nha niile nwere ike ijikwa ikike nke asọmpi asọmpi wee mepụta atụmatụ siri ike maka data.
Rivalfox Asọmpi Asọmpi ọgụgụ isi nke Platform gụnyere
Nlekota oru webusaiti - Nyochaa ndị asọmpi na ebe nrụọrụ weebụ ma nata ọkwa ozugbo enwere mgbanwe. Rivalfox na - eme ka mmelite pụta ìhè, ruo na obere nkọwa, iji gwa gị ihe ọbụlagodi usoro mgbanwe pere mpe. Site na mkpokọta weebụsaịtị ha, ị nwere ike wepụcha mkpọtụ ahụ ma lekwasị anya na mpaghara peeji ndị dị gị mkpa.
Nlekota oru ntanetị - Na-anakọta akụkọ, edemede na mkpọtụ sitere na isi akụkọ akụkọ niile wee gosipụta ha na akpaghị aka na dashboard gị na akụkọ kwa ụbọchị. Sochie ihe ndị osompi gị na-enweta, site na mgbasa ozi na ntaneti mgbasa ozi, ma gosipụta ha na nke gị. Nwere ike hazie ruru ise dị iche iche Keywords
kwa osompi maka oke mkpuchi na nkenke.
Okporo ụzọ na Nyochaa Nyocha - Nyochaa okporo ụzọ gị ma jiri ya tụnyere nke ndị asọmpi gị, na-egosipụta KPI ndị kachasị mkpa: nleta pụrụ iche, nyocha peeji nke onye ọrụ ọ bụla, ọkwa ahịa ụwa na ndị ọzọ. Nweta nghọta zuru ezu banyere okporo ụzọ ha iji mee atụmatụ ọnụ ọgụgụ ahịa ma chọpụta mmetụta nke mkpọsa ahịa. Tulee onu ogugu ha megide nke gi iji kpachapu uzo nke uzo gi. Gụnyere ọkwa zuru ụwa ọnụ, akara ngosi azụmaahịa, nyocha peeji nke onye ọrụ, njikọ na-abata, njirimara arụmọrụ Google, akara ngosi dị mkpa weebụsaịtị, ndị ọbịa e mere atụmatụ, oge na saịtị, ọnụego bounce, isi mmalite okporo ụzọ, okporo ụzọ ọchụchọ, mkpụrụ osisi na okwu akwụ ụgwọ.
Nlele nke Social Media - Nyochaa ụlọ ọrụ mmekọrịta ise kacha elu na-eziga ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ onye asọmpi a. Lelee njikọ aka na ịgbaso n'ofe ọdịnaya ha niile.
Nchịkọta Blog na Ọdịnaya Ahịa - Chọpụta ọdịnaya ndị na-asọmpi gị nke ọma ma chọta ebe ha nwere oke mbikọ mmekọrịta. Jiri data ha mee ka atụmatụ nke gị dị mma ma merie ndị na-ege ntị.
Email na Ahịa Ahịa - Ike inyocha akwụkwọ akụkọ iji hụ ihe ndị asọmpi gị na-anwa ịkọrọ ndị ọha ha lekwasịrị anya, na otu oge ha na-ekerịta ya.
Tags: njikere ndị asọmpiNlekota Blogasọmpi matanleba anya email nlekotanyocha asọmpiOnye asọmpi Benchmarkingnlekota emailozi emailnyochaa ndị asọmpiOzi na nlekota isiokwundigboRivaliqsaasNyochaa SEO Ozinlekota oru mgbasa ozisoftware dị ka ọrụtrackmavenMonitoring Ozi nlekota oruNchọgharị Change Webpage